Environmental Measuring Instrument Factory - China Environmental Measuring Instrument လုပ်ငန်းရှင်များ၊
DRK616 ဖုန်စုပ်အခြောက်ခံမီးဖို (အချိန်ကိုက်ဖြင့် မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာ)
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်- ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပေါင်းများစွာ သေတ္တာအပူပေးခြင်းတွင် အောင်မြင်သောအတွေ့အကြုံကို အခြေခံ၍ မျိုးဆက်သစ် လေဟာနယ်အခြောက်ခံမီးဖို၊ စဉ်ဆက်မပြတ် လုံ့လဝီရိယရှိစွာ သုတေသနပြုခြင်း၊ ရိုးရာနည်းပညာတွင် အောင်မြင်မှုများနှင့် အပူကူးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပြီးပြည့်စုံသော အပူကိုရှာဖွေခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် "ပုလင်းလည်ပင်း" ကို တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ conduction နည်းလမ်း။ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု- လေဟာနယ်အခြောက်ခံသည့်မီးဖိုကို အပူဒဏ်ခံနိုင်သော၊ အလွယ်တကူ ပြိုကွဲပျက်စီးလွယ်ပြီး အောက်ဆီဂျင် အလွယ်တကူ ထုတ်နိုင်သော အရာများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး fil...
DRK643 ဆားဖြန်းဖြန်းချေးစမ်းသပ်ခန်း၊ ဤထုတ်ကုန်အား လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ သုတ်ဆေးများ၊ အပေါ်ယံပိုင်းများ၊ မော်တော်ကားနှင့် ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ လေကြောင်းနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ၊ သတ္တုပစ္စည်းများ၏ အကာအကွယ်အပေါ်ယံပိုင်းများနှင့် ပါဝါနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်များ၏ ဆားဖြန်းချေးစမ်းသပ်မှုတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု- DRK643 ဆားဖြန်းဖြန်းချေးစမ်းသပ်ခန်း၊ ဤထုတ်ကုန်သည် လျှပ်စစ်ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ သုတ်ဆေးများ၊ အပေါ်ယံပိုင်းများ၊ မော်တော်ကားနှင့် ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ လေကြောင်းနှင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ဆားဖြန်းမှုစမ်းသပ်မှုတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
GT11 လက်ကိုင် တိကျသော သာမိုမီတာ
GT11 လက်ကိုင်တိကျသောသာမိုမီတာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော တိကျမှုမြင့်မားသောလက်ကိုင်သာမိုမီတာဖြစ်သည်။တူရိယာသည် အရွယ်အစားသေးငယ်သည်၊ တိကျမှုမြင့်မားသည်၊ အနှောင့်အယှက်ဆန့်ကျင်နိုင်မှုအားကောင်းသည်၊ ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါဝင်သည်၊ တပ်ဆင်ထားသော စံ RTD မျဉ်းကွေး၊ ITS-90 အပူချိန်စကေးနှင့်ကိုက်ညီသည်၊ အပူချိန်၊ ခံနိုင်ရည်စသည်တို့ကို အမြင်အာရုံဖြင့်ပြသနိုင်သည်။ နှင့် PC ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်း သို့မဟုတ် ဆိုက်အတွင်း တိကျမှုမြင့်မားသော တိုင်းတာခြင်းတို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်သည်။အသုံးချမှုများ- ■ တိကျမှုမြင့်မားသော ကိရိယာများ...
CF87 အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ စစ်ဆေးရေးကိရိယာ
“JJF1101-2003 ပတ်ဝန်းကျင် စမ်းသပ်ကိရိယာ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ ချိန်ညှိခြင်း သတ်မှတ်ချက်များ”၊ “JJF1564-2016 အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ စံချိန်စံညွှန်းချမ်ဘာ ချိန်ညှိမှု သတ်မှတ်ခြင်း” နှင့် GB9452-850, J2B/ ကဲ့သို့သော နည်းပညာဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ချိန်ညှိခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ လိုအပ်ချက်များ 91၊ စမ်းသပ်သူများသည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု၏ အဆင်ပြေမှုနှင့် လက်တွေ့ကျမှုကို အပြည့်အဝ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။စက်ပစ္စည်းများသည် ခေတ်မီပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ခေတ်မီစမ်းသပ်ခြင်း၊
သာမန် စဉ်ဆက်မပြတ် အပူချိန် ရေချိုးခြင်း။
ထုတ်ကုန်တွင် လှပသောအသွင်အပြင်၊ နည်းပညာအဆင့်မြင့်မှု၊ လျင်မြန်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ တိုတောင်းသောအကူးအပြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ မတည်ငြိမ်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့် အပူချိန်နယ်ပယ်ရှိ သေးငယ်သောအပူချိန်ကွာခြားမှုစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ထုတ်ကုန်အသေးစိတ် ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ● ဤထုတ်ကုန်တွင် လှပသောအသွင်အပြင်၊ နည်းပညာမြင့်မားမှု၊ လျင်မြန်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ တိုတောင်းသောအကူးအပြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ မတည်ငြိမ်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့် အပူချိန်စက်ကွင်းအတွင်း သေးငယ်သောအပူချိန်ကွာခြားမှုစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။● ဒီကိန်းသေ...
အင်္ဂါရပ်များ- 1) သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး လျှင်မြန်စွာအအေးခံနိုင်ခြင်း 2) ထိတွေ့မျက်နှာပြင်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကွန်ပြူတာထိန်းချုပ်မှု၊ အားကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက် 3) မြင့်မားသောတိုင်းတာမှုတိကျမှု၊ အထူးသဖြင့်ကြီးမားသောလူများအတွက်နေရာထိုင်ခင်းချိန်ညှိခြင်းအတွက် အထူးသင့်လျော်ပြီး 4) လက်ကိုင်သာမိုမီတာသည် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 5) ဆိုဒ်တွင်း အပူချိန်ကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိခြင်း 3. ထုတ်ကုန် စမ်းသပ်မှုမျဉ်းကြောင်း သိရှိရန် အပူချိန် အတည်ပြုစနစ်ဖြင့် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည် 3. ထုတ်ကုန် စမ်းသပ်မှုမျဉ်းကွေး- ဖွဲ့စည်းမှု အမှတ်စဉ် နံပါတ် ကိရိယာ အမည် မော်ဒယ် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) စစ်ဆေးမှု...
123456နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၁၀